Qeybta 1: Maxaad Windows Media ciyaaryahanka uusan ciyaari karo m4a?
Qeybta 2: Sida loo ciyaaro M4A files kordhiyo ciyaaryahanka Windows Media?
M4A waa kordhin file maqal ah. Encoded la AAC ama riixo sireed sare, kordhin file M4A la sii daayay iyada oo ujeedadu tahay in ay ku guuleystaan ​​ku kordhin file MP3 aadka loo jecel yahay. Labada kordhin file kuwani waa u files audio kaliya. The MPEG 4 files oo kaliya ay leeyihiin audio guud ahaan la siiyo kordhinta M4A ah. Marka la barbar dhigo MP3 faylasha caadiga ah, files M4A leeyihiin tayo fiican iyo dhawaaqa inta badan waa yar-yar ee size. Files M4A Kuwaas waxaa si fudud u ciyaaray karo ciyaaryahan kasta oo muusiko ah.
By default, kordhin file M4A aan la taageeray windows media player. Files M4A ayaa waxaa sida caadiga ah la encoded AAC taas oo keenta in "lossy" riixo taas oo ah mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee keentay awood la'aanta windows media player inuu u ciyaaro faylasha sida.
Ma waxaad isku dayaya inuu u ciyaaro files M4A ee aad daaqadaha media player? Waa hagaag, haddii ay sidaas tahay, waxaad laga yaabaa in ay ku guuldareysato inay furo files sida aad warbaahinta ciyaaryahanka. In kasta oo xaqiiqda ah in windows media player ma taageeri files M4A; waxaad hubaal doonayo inuu furo file ee media player. Waxaa jira laba xal waaweyn oo ay ku iman kartaa in aad samatabbixinta ee seenyada noocan oo kale ah:
Xalka 1: Casriyaynta aad windows media player
Haddii aad runtii doonayaa inaan ciyaaro files M4A aad windows media player, ka dibna isku day in aad kala soo bixi nooca ugu dambeeya ee ciyaaryahanka. Haddii aan dambayn, isku day in aad kala soo bixi karo windows media player 11 oo ay ku jiraan taageero buuxda u files M4A. Oo dhan qoraalkii ugu dambeeyey ee taageerada windows media player files M4A iyo iyaga flawlessly ciyaari karo.
Xalka 2: Beddelaan files M4A daaqadaha media player files socon
Sababta sababta windows media player uusan awoodin in uu ciyaaro files M4A yahay sababta oo ah incompatibility ciyaaryahanka. Files M4A ayaa la socon karin windows media player iyo sidaas oo kale qof xal oo macquul si loogu badalo files, kuwaas oo galay windows media player files socon. Waxaa jira qalab kala duwan oo laga heli karo suuqa in loogu badalo karo files M4A aad galay windows media player files socon.
Wondershare Video Converter kama dambaysta ah waa qalab ugu fiican laga helo suuqa in si fudud loogu badalo karo files M4A aad galay windows media player files socon. User saaxiibtinimo, oo lacag la'aan ah oo ah qiimaha iyo hufnaan sare ayaa ka mid ah sababaha dadku door bidaan wondershare video Converter kama dambaysta badan Converter kasta oo kale oo laga heli karo suuqa.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu waaweyn ee la isticmaalayo wondershare video Converter kama dambaysta ah waxaa ka mid ah dhaqso diinta file, fududaato in la isticmaalo, customizable iyo taageero in ka badan afar kun oo qaabab file.
Sida loo badalo files M4A galay windows media player files socon?
Talaabada 1: Download wondershare video Converter kama dambaysta ah
Waxaad halkan ka soo dejisan kartaa taas awood leh qalab diinta file. Software gabi ahaanba waa mid lacag la'aan ah oo ay maamushaa labada Mac iyo Windows madal. Ku rakib software ka dib duuban.
Talaabada 2: Beddelaan M4A in windows media ciyaaryahan video socon
Isticmaalka Converter wondershare video kama dambaysta ah, aad u bedeli karaan faylasha M4A aad qaab kasta. Horumarinta ayaa diiradda lagu saaray samaynta user saaxiibtinimo software. Waxaad u bedeli karaan faylasha M4A aad kasta oo kale windows media ciyaaryahan file socon kaliya ka dib markii saddex tallaabo fudud:
1. Laga soo bilaabo interface user, dooro "Add files" badhanka in la furo file M4A aad u furmo. Waxaad dooran kartaa wax kasta oo file maqal ah ama video. Marka aad gujisid "Add files", browser file ah ka muuqan doontaa meesha aad dooran kartaa file aad rabto in aad si loogu badalo. Si kastaba ha ahaatee haddii aadan rabin in aad isticmaasho browser file ah, sidoo kale si fudud aad jiidi karaan jeedi file M4A in aad rabto in aad si loogu badalo ka.
2. Dhinaca geeska midig ee shaashada, waxaad arki doontaa qaybta qaab wax soo saarka. Qaybtani waxay ku taxan oo dhan qaabab aad u bedeli karaan file M4A aad. Wondershare Video Converter kama dambaysta ah taageertaa dhowr ah oo ay ka mid yihiin qaabab AVI, wmv, MP3, MOV iwm Dooro qaab aad rabto in aad file in diinta.
3. Marka aad hubto in faylka si aanay u soo noqon oo qaab sax yahay, guji badhanka diinta ee koonaha midig ee shaashadda. Your file la isla badali doono qaabka la doonayo.
Talaabada 3: Play M4A in windows media player
Kadib marka aad si guul leh ku badaley file M4A aad galay ciyaaryahan dillaac fudud daaqadaha file socon, si fudud ayaad ka ciyaari kartaa in ciyaaryahanka.
> Resource > WMP > xalin ma ciyaari karaa files m4a in Windows Media Player